Kwinqaku lethu, "Kuphi na okuqulethweyo kwaye imiphi imisebenzi eyenza" ungayifumana ukuba yiziphi izinto ezifanelekileyo eziqulethe i-ribose.
Sisebenzise ukuba iswekile inobungozi! Kodwa ishukela yendalo - ribose - isekela ngokusisiseko umsebenzi weentliziyo kwaye inciphisa ukukhathala okungapheliyo.
I-Sugar enye yeendlela ezilula kumandla, kwaye enye yeyona ndlela elula kakhulu ishukela, i-ribose, ingaqhelekanga ikunike umrhumo wamandla kwaye inciphise intlungu ebangelwa zizifo zentliziyo, okanye iintlungu zomzimba. I-Ribose (okanye i-D-ribose) - i-pyatikarbonatny (i-pentode) ishukela, umsebenzi oyintloko-ukukhuthaza umveliso womzimba nge-adenosine triphosphate (ATP). Ukwahlula oku kukhulula amandla kwaye kunceda ukondla intliziyo, izihlunu, ingqondo kunye nazo zonke ezinye iisisu zomzimba. Ingakumbi ushukela luncedo kumzimba wesetyhini.
I-Ribose ayikwazi ukufumaneka kuyo nayiphi na into yokutya. Umzimba kunye nemisebenzi yalo mfazi ngokwayo ivelisa kwi-glucose. Xa isidingo samandla sanda ngokukhawuleza (kunye nokungaphumeleli kwintliziyo, ukugula okungapheliyo okanye i-fibromyalgia), i-ribose ichithwa ngokukhawuleza kwaye inqanaba layo kwiishukela liwela ngokukhawuleza. Xa umzimba ungenalo i-ribose eyaneleyo, kufana nokuzama ukukhanyisa umlilo ngaphandle kombane - okwaneleyo.
I-Ribose intake ayikwazi ukuthintela ukuphuhliswa kwesifo esingapheliyo okanye isifo senhliziyo. Kodwa ukuba sele sele unayo le ngxaki, i-ribose iya kukunika amandla okufuneka ufumane ubomi obupheleleyo, okuya kuthintela ukubonakaliswa okungakumbi kwezilwanyana zesetyhini.
Abantu abafazi, kunye nabantu abanesifo esingapheliyo (iquka ukukhathala, ukungazinzi, inkungu entloko, intlungu kunye kunye neentlungu) kunye ne-fibromyalgia (isifo se-muscular pain), sichazwa ngamanqanaba aphantsi. Banokukuncedwa ngonyango kunye nezondlo zokutya kunye ne-ribose. Xa isongezelelo sokutya esine-ribose sithathwa ngesimo se powder, inyama iyahlula kwiishukela ezisele kwaye igcina i-ATP. Utyando kunye ne-ribose njengesongezelelo kwonyango olusele lube luthembisa kakhulu, umzekelo, ekulweni ne-fibromyalgia.
I-Ribose unyango ixhasa ngokusisiseko impilo yeentliziyo. Iphucula ukuhamba kwegazi kubantu abaphethwe yi-coronary disease (ischemia ebizwa ukucotha ukuhamba kwegazi ukuya kwintliziyo yesisipha), ukukhawuleza ukubuyisela emva kokuhlaselwa kwentliziyo nokubuyisela izicubu zentliziyo emva kokuhlinzwa. Emva koko, ngenxa yenhliziyo ebuthathaka, ukunikezelwa kwamandla kuphelile, kwaye intliziyo iyimisipha efanayo njengazo zonke ezinye, kwaye ixatyiswe ngesifo senhliziyo okanye ukungaphumeleli kwentliziyo. Xa intliziyo ihlupheka ngenxa yokungabi namandla, ayikwazi ukuphumla phakathi kokuphambana nokuzaliswa ngokupheleleyo ngegazi, kuba ukuphumla intliziyo kudinga amandla amaninzi kunokugqithisa! I-Ribose inokubonelela ngenhliziyo ngamandla angaphezulu okufunekayo ukuze isebenze ngokuqhelekileyo, ngokukodwa, ukuphumla. Igalelo elihle le-ribose entliziyweni livivinywa kwisifundo yiYunivesithi yaseBonn eJamani. Izigulane ezilishumi elinesibhozo ezinokukhubazeka kwentliziyo zithathe i-supplementary supplement kunye ne-ribose, okanye indawo ye-placebo. Iqela elaphathwa nge-ribose libonise ukuphucuka okukhulu kuzo zonke iiparameters zomsebenzi wenhliziyo.
Ukufumana i-riboza i-long-term adresses kwaye ayinayo imiphumo emibi.
Ithengiswa ngefowder kunye neepsules. Ubuncwane bubulula ukuthabatha - buya kuhlanjululwa kwisixhobo samanzi, kwaye kaninzi sithengwa.
I-dose ephakanyisiweyo yokukhathala okungapheliyo kunye ne-fibromyalgia ngu-5 g kathathu ngosuku malunga neveki ezi-3 ukuya ku-6. Emva koko, unokunciphisa ukutya kwixesha eli-2 ngosuku. Inqanaba elifanayo linconywa kwisifo senhliziyo, kodwa kufuneka kuthathelwe ubuncinci kwiiveki ezingama-6 phambi kokuba kuncitshiswe kumaxesha amabini ngosuku.
Iingcamango eziphambili malunga neyeza zanamhlanje
Ifilosofi yaseTshayina yeYin neYang
Indlela yokulawula phezu kwamadoda angcono?
Umsindisi we-Apple 2016 - imbali yeeholide, imikhosi, iimpawu, izenzeliso, ukuxoxwa ngenhlanhla. Mfutshane kunye nekhamkcozo ngokuguqulwa kweNkosi kwivesi, iprose, iifom, ii-postcards nemifanekiso
Kuthekani ukuba umntwana unomsindo ogqithisayo?
Ngaba ndifuna ukuthatha inyathelo?
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - iSagittarius yabesifazane - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Iingubo zokubusika ezinokubhakabhaka kakhulu ngo-2016-2017 (ifoto kunye neendlela)
Yintoni ekumele ibe yindoda ngokumalunga nomfazi
Ndingathanda ukufumana enye ingeniso
Senza i-classic massage massage